Kolombia : Fifidianam-Paritra 2011 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Novambra 2011 7:08 GMT
Ny Alahady 30 oktobra 2001 no natao tao Kolombia ny fifidianam-paritra [teny espaniola] hanendrena izay ho olom-boafidy amin'ny fitantanana raharaham-bahoaka eny ifotony : governora, antenimieram-paritra, ben'ny tanàna, mpanolontsain'ny tanàna, ary ny antenimieran'ireo mpitantan-draharaha eny an-toerana.
I Kolombia dia voatsinjara ho fari-pitantanana ahitàna departemanta 32 (ivondronan'ireo kaominina) eo ambany fitantananà governora iray. Ireny departemanta ireny tsirairay avy dia samy manana Antenimiera departemantaly, ary ny kaominina isan'isany (antsoina hoe ‘municipalité’ na tanàn-dehibe arakaraka ny isan'ny mponina ao aminy) dia manana ben-ny tanàna iray sy mpanolotsaina maro izay misahana indrindra indrindra ny zava-mitranga ao anivon'ilay Kaominina, sy antenimieran'ireo mpitantan-draharaha eo an-toerana izay misolotena ireo vakim-paritra.
Arakaraky ny lanjan'ny toerana hofenoina, arahamaso akaiky ireny fifidianana ireny toy ny fanarahana ny fifidianana ho filoham-pirenena. Mailo tanteraka ny vahoaka mikasika io teboka io, ary izany dia tsapa hatrany anaty fampahalalam-baovaon'olon-tsotra rehetra any sy eny amin'ny tambajotra sosialy.
Betsaka no nanentana handeha hifidy, tsy miankina amin'izay ho mpirotsaka na antoko politika manana ny firehany [ny siokantsera rehetra ao anatin'ity lahatsoratra ity dia amin'ny teny Espaniola avokoa].
Avy any ivelany, manoratra i RosaCris (@rosacris) :
Zava-dehibe ny vato tsirairay. Tahaka izany izy ity ry kolombiana keliko isany. Voalohany tsy hifidianako izao. Lesona ho an'ny hoavy rehefa ho any ivelany aho. Handeha aho…
Ary ilay mpanao gazety anaty aterineto, Juan Martín (@juamac) nandefa ny hoe :
Foibe fandraharahana La Alpujarra, toerana iaingàn'ny fitantanana ny Departemantan'ny 'Antioquia sy ny Kaominin'i Medellín. Sary an'i Sekretarian'ny Fitaterana sty ny Fifamoivoizana ao Medellín (CC BY 2.0)
Ora roa latsaka alohan'ny fiafaran'ny androm-pifidianana, efa mba nifidy ve ianao ? #Yocuidomivoto [tandremako ny vatoko]
Misy vaovao miparitaka tsy mitsahatra amin'ny finday mba hiampangàna ireo tsy fetezana hita, ary ny tranonkala Pilas con el voto dia namoaka anaty aterineto ny tatitra manaraka ny zava-misy avy amin'ny vaovao alefan'ireo olom-pirenena.
Víctor Solano (@solano), bilaogera sady mpanao gazety, dia nilaza avy any Bogotá :
Laharan'antso maimaim-poana hitorohana ireo tsy fetezan-javatra mandritra ny #VotoCo : 018000912005
Raha i PAPpereza (@papereza) kosa nampahafatatra hoe :
Hatreto aloha dia i Antioquia no mahazo ny amboara amin'ny resaka tsy fetezan-javatra mandritra ny fifidianana navoaka tao amin'ny Pilas Con El Voto.
Olom-pirenena vitsivitsy no namoaka ny tatitra momba izay hita sy niainany, rehefa nifàrana iny andro iny.
Carlos A. Ramirez (@Caligular) niteny hoe :
Tena nilamina be ny fifidianana taty amin'ny faritra afovoany andrefan'i Medellín ary tsara ny taham-pandraisana anjara. Orana manify no namarana ny andro.
Ary i Comunicacion Wiki (@Wikiperiodismo) nitatitra hoe :
Laharana lavabe no tsinjo nanoloana ireo biraom-pifidianana sasantsasany tao Cali, mirotsaka any avaratr'i Valle ny ririnina ary azo lazaina ho tsara ny filaminam-bahoaka
Misy fandinihana hafa nivoaka nandritra ny fikatonan'ny biraom-pifidianana, tahaka ny an'i Luis Alirio Calle (@LuisAlirioCalle), momba ny fividianana vatom-pifidianana :
Ny olan'izao tontolo izao dia tsy ny zavatra bitika velively, tsy ny fanomezana madinika, tsy ny asa madinika. Ny olan'izao tontolo izao dia ny fahatsiarovan-tena.
Avy any Medellín, Juan Mosquera (@lluevelove) dia nanambara fa :
Ry zareo no nanapa-kevitra fa tsy hisy dikany ny vatom-pifidianany ary tsy hanova zavatra amin'ny ora farany.
Ny sasany nampahafantatra ny fanehoan-keviny nandritra ny fotoana nanombohan'ny fanisàna vato, toa an'i Carlos Correa Cano (@kloscorrea) :
Azafady ry vahoaka Kolombiana, tsy ho apetraka fotsiny ho eo an-damosin'Andriamanitra izy ity… Ny tsy fandehanana nifidy sy ireo voafidy dia noho ny hadalàntsika.
Nampitahainy tamin'ny baolina kitra, M. Arias (@chori) niteny hoe :
Henoy ireo valim-pifidianana, toy ny manatrika fandakàna penalty aho no fahatsapako azy, saingy amin'ny endriny mafimafy kokoa. Tena mampihoron-koditra.
Raigohead (@raigohead) dia nandefa fampitandremana iray avy any Medellin :
Matahora. Matahora faran'izay mafy.
Avy any amin'io tanàna io ihany, Perla Toro (@PerlaToro) dia nanoratra nandritra ny fanambaràna ny fahalaniana ho ben'ny tanàna lany tao Bogotá sy Medellín [teny espaniola], ny mpirotsaka Gustavo Petro sy Aníbal Gaviria :
Misy Andriamanitra ary mitoetra eo amin'ireo vahoaka mendrika izy. #elecciones2011
Angel, avy amin'ny bilaogy PC Web, dia mizara ny kiana avy aminy [teny espaniola] :
Ny fomba nihazakazahan'ireo « mpivarotra mandehandeha » (entiny hilazàna ny fitoviana misy amin'ireo mpivarotra mandehandeha eny rehetra eny, ireo izay mivarotra zavoka, solomaso sy ny karazan-javatra toy izany) nanatona ireo mpifidy mba hanosehana azy ireo hifidy ny mpirotsaka natolony dia tena nahazendana tokoa.
Ary manohy izy amin'ny fametrahana fanontaniana mikasika ny tsy fisian'ny fifidianana amin'ny fomba elektronika ao Kolombia :
Tsy mifampiankina velively amin'izay vatom-pifidianana nangonina isan-tanàna teto Kolombia, mino aho fa fotoana izao (efa ela ihany no tokony ho efa fotoanany) hametrahana fomba fifidianana manaraka ny fomba elektronika, tsy mila taratasim-pifidianana, tsy ilàna olona maro eo ambony latabatra, tsara kokoa, azo atao ny mifidy avy any an-tranon'ny tena raha tian'ny mpifidy, fa ilaina fotsiny ny ananany karatra manan-kery, ny lavotondrony sy/na ny endriny ao anatin'ilay ‘système’ mba hitsirihana ny fisandohana ny maha-izy ny tena. Nefa tsia, eto, ho an'ity firenena mihisatra amin'ny resaka fahafaha-mampiasa aterineto ity, aleo mandanilany foana amin'ny biletà, amin'ny fampiasàna olona fanampiny, mpitsara, vavolombelona, sns ary tsy mampiasa vola amin'izay teknolojia avo lenta manamora ny dingana amin'ny fifidianana sy manome azy ireo ny mangarahara.
Nisy antso iray ihany koa nalefa tamin'ny alàlan'ny Facebook [teny espaniola] mba hametrahana biletà iray milaza hoe « Tsia amin'ny fanavaozana ny lalàna 30 », ka ny tanjona amin'izany dia ny hisarika ny saina amin'ny fanavaozana ny fampianarana ambony [teny espaniola] nataon'ny governemanta amin'izao fotoana.
Ny zava-tsy nampoizina ho an'iny andro iny dia ny fandresen'ny vato fotsy tao amin'ny kaominina Bello (departemantan'i Antioquia) izay tsy maintsy hamerina ny fifidianana [teny espaniola].
Ho famintinana, fandinika iray avy amin'i Ana Vallejo (@anavallejoc) :
Ny inoako dia izao, miàsa loha isika amin'ny androm-pifidianana fa avy eo ny vahoaka tsy misy miraharaha izay mba hanara-maso ny amin'ny fanatanterahana ireo fanomezan-toky natao.
Azo atao ny manaraka [teny espaniola] ny fanehoan-kevitra momba ireo fifidianana ireo amin'ny tenifototra #elecciones2011 sy #VotoCo.